Turkiga oo digniin kale u direy Mareykanka | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Turkiga oo digniin kale u direy Mareykanka
Turkiga oo digniin kale u direy Mareykanka
Congress-ka Mareykanka ayaa talaadadii u codeeyey in lasoo afjaro xayiraadda saran jasiiraddan oo loo soo rogay 1987-kii, si looga fogaado tartan dhinaca hubka ah.
Qubrus ayaa laba u kala qeybsaneyd tan iyo sanadii 1974-kii, markaasi oo Turkey ay qabsatay qeyb ka mid ah, ayada oo uga jawaabeysa afgambi uu ka dambeeyey taliskii militari ee Greece.
Go’aanka dowladda Mareykanka “ma yeelan doono natiijo aan ka ahayn inuu wiiqo dadaallada xasiloonida gobolka, iyo inuu abuuro halis halis darran” waxaa sidaas lagu yiri bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Turkey.
Tallaabada Mareykanka ayaa waxaa lagu ansixiyey ayada oo qeyb ka ah sharciga miisaaniyadda gaashaandhigga, oo ay ansixiyeen labada aqal ee congress-ka Mareykanka, islamarkaana la filayo in uu saxiixo madaxweyne Trump.
Xiriirka Ankara iyo Washington ayaa maraya heerkii ugu hooseeyey taariikhda.
Waxaa jira arrimo dhowr ah oo labada dal ay isku khilaafsan yihiin, waxaana ka mid taageerada Mareykanku siiyo maleeshiyada Kurdish-ka Syria, oo Turkey ay u aragto argagixiso, iyo soo iibsashada Ankara ee habka gantaallada difaaca Ruushka ee S-400.